> Resource > DVD > Sida loo iPlayer Guba BBC in DVD
IPlayer BBC waa weyn, siinta dadka isticmaala xamuul ah barnaamijyada TV cajiib ah inaad kala soo baxdo. Si kastaba ha ahaatee, videos ka soo bixi BBC iPlayer waxaa ilaaliya Microsoft ee "Play u Sure" ilaalinta nuqul DRM si ay u dhici doonaa maalmood ka dib ka dib markii duuban ama arkaysid. Sidaa darteed, wax badan oo dadka isticmaala doonayaan in ay gubaan videos ka BBC iPlayer in DVDs qaar ka mid ah sababaha hoos ku qoran:
Guba iPlayer BBC in DVD loogu daawashada iyaga on TV ama DVD ciyaaryahanka.
Ma doonaysaa in nafo kuwaas TV oo xiiso leh muujinaya soo bixi BBC iPlayer weligiis Raaxo mar walba.
Waayo, in kastoo sabab aad leedahay, haddii aad rabto in aad ku gubi BBC iPlayer video download in DVD, waxaad u leedahay in meesha laga saaro ilaalinta DRM koowaad ka dibna waxay ku gubi DVD. Si aad u yeeshaan, uma baahnid in aad si aad u hesho laba qalab caawimo. Iyadoo Wondershare Video Converter , si fudud oo dhaqso oo aad samayn karto oo dhan in app dhan-in-mid. Kaliya aad qaadi kartaa talaabooyin fudud oo saddex kaliya si loogu badalo iPlayer BBC in DVD ah oo tayo sare leh waxa ku jira, iyo inta ay socoto, DRM waxaa si otomaatik ah saari doonaa. La yaabka leh, miyaanay ahayn?
Hoos waxaa ku qoran tilmaan tallaabo-tallaabo ayaa kuu gudbin kara.
1 dejinta aad BBC iPlayer files
Hadda, kaliya dajiyaan aad BBC deegaanka iPlayer files si app this by riixaya badhanka Add Files. Laakiin, u fiirso in aad u baahan tahay in ay sameeyaan shaqo ee "Guba" interface halkii interface ah "Beddelaan". Si kale haddii loo dhigo, waxaad u baahan tahay in la garaaco tab Gubashada hogaanka ugu horeysay, ka dibna ku dar faylasha aad.
2 Habee DVD kuu gaar ah menu
Hit Change Template ku interface hadda, ka dibna uu furmo suuqa pop-up ah, guuraan slider dhinaca midig xitaa dooro mid ka mid ah DVD template menu. Next, aad astaysto DVD kuu gaar ah menu ay ku daray sawir asalka ama music iwm
3 Beddelaan BBC iPlayer files si DVD
DVD5 iyo DVD9 Labada waxaa taageera. Sidaas daraadeed waxaad u gelin kara DVD disc maran halkan. Ka dib markii in, riix badhanka Gubashada rukun-xaq u hooseysa interface ah si ay u bilaabaan BBC iPlayer files si DVD ku gubanayso. Waa mid aad u fudud, soo maaha? Shaqada inteeda kale si toos ah samayn doona app this. Kaliya in aad ha u ordaan ee asalka. Wax yar ka dib, waxaad heli doontaa disc DVD Writen ah in aad ka ciyaari karaa ciyaaryahan kasta DVD.